Kungani uMartech eyi-Strategic Imperative Yokukhula Kwebhizinisi | Martech Zone
Kungani uMartech eyi-Strategic Imperative Yokukhula Kwebhizinisi
NgoMsombuluko, Juni 12, 2017 UDan Purvis
Ubuchwepheshe bokumaketha ibilokhu yanda eminyakeni eyishumi eyedlule, ingasaphathwa eyeminyaka. Uma ungakamamukeli uMartech, futhi usebenza kwezokumaketha (noma ukuthengisa, ngalokho), kungcono ungene ebhodini ngaphambi kokusala ngemuva! Ubuchwepheshe obusha bokumaketha bunikeze amabhizinisi amathuba okwakha imikhankaso yezokumaketha enomthelela futhi elinganisekayo, ahlaziye idatha yezokumaketha ngesikhathi sangempela, futhi enze ukuzenzakalela kokukhangisa kwawo ukushayela ukuguqulwa, ukukhiqiza kanye ne-ROI phezulu, ngenkathi kwehliswa izindleko, isikhathi nokungasebenzi kahle. Yilokho esizokhuluma ngakho kabanzi kule ndatshana - ubuchwepheshe bokumaketha busiza kanjani ukuthi imikhiqizo ikhule, ngenkathi ikhiqiza inani elibonakalayo lebhizinisi.
I-Agile Marketing isho i-ROI engcono
Iminyango eminingi yezokumaketha iyaxwaya basebenzise imali yabo ekukhangiseni ngoba abacabangi ukuthi bangasho kahle ukuthi ngubani ozobona izikhangiso. Lokhu kungaba yiqiniso ezweni lakudala lezokumaketha, kepha, ezweni lanamuhla, lonke lolu lwazi lutholakala ezandleni zomnyango wezokukhangisa.
Ngobuchwepheshe bokumaketha, umakethi, ibhizinisi elikhulu noma umnikazi wenkampani uyakwazi ukubheka ngokunembile ukusebenza komkhankaso wokukhangisa futhi ahlole ukuthi ngubani osibonayo leso sikhangiso, nokuthi unomthelela onjani okwamanje futhi usazoqhubeka nokuba nawo. Lezi zinto zingashintshwa ngendlela edingekayo ukuthola amakhasimende amaningi angena emnyango.
Ngamanye amagama, iMartech inika amandla ukuthuthuka okuqhubekayo ukushayela ithrafikhi ebhekiswe kakhulu, ukukhiqiza ukuhola okuningi, futhi ibike i-ROI ibuyele ebhizinisini ngendlela esobala. UDan Purvis, uMqondisi kwa I-Comms Axis
Izinkampani zinamathuba amaningi okucija nokuthuthukisa amasu azo ngokunembile ngokwenza ukubikezela kwedatha kube lula. I-ROI yilokho okwenziwayo konke ukumaketha ukufeza. Ufuna ukuphuma kakhulu kunalokho okufakile, futhi unedatha eningi ongayihlaziya futhi uyisebenzise ukukhomba amandla nobuthakathaka, amasu akho anganemba kakhulu futhi afinyeleleke kunanini ngaphambili.
Ukumaketha kungene esikhathini esihle soshintsho oluhle, futhi kungokuthuthuka kobuchwepheshe obusha nezinqubo lapho kungenzeka khona.
UMartech ubeka iKhasimende lakho Kuqala
Ukumaketha kuhlale kuncike kwimininingwane yamakhasimende nasekuqondeni. Kepha, njengoba idatha eningi isiyatholakala, izinqubo nezindlela zokusebenzisa nokuhlaziya le datha seziyinkimbinkimbi ngokwengeziwe.
Imboni ithole ipivot impela ekubeni nedatha eningi futhi ingaqondi ngempela ukuthi kusho ukuthini noma ukuthi ingabasiza kanjani, ukwazi ukuyilandela konke ngesikhathi sangempela nokukhothoza ukuqonda okubalulekile nokwenzeka kuyo.
Kanjalo, indima yomthengisi (kanye nanoma imuphi umnyango wezokumaketha) iguqukele ngaphezu kobuciko. Sekuyinto ebaluleke kakhulu ekukhuleni kwebhizinisi ngokwengeza ungqimba lwesayensi nobulukhuni ekuhlaziyweni komkhankaso. Ayikho indawo yokucasha, kodwa yonke indawo ongakhula kuyo.
Ukukhuphuka Kwemisebenzi Yokumaketha
Imisebenzi yezokumaketha ngakho-ke ivele njengensimu ethokozisayo ebilokhu iqoqa umfutho ngenxa yomthelela oqondile enawo ebhizinisini 'lokushayela i-ROI ebonakalayo nebonakalayo. Ihlela amasu nezinqubo zakho ngokuhlelekile, zombili ngokusebenzisa ubuchwepheshe nangokuhambisana nemisebenzi yebhizinisi engaphandle komnyango wezokumaketha. Ukusebenza kahle kokumaketha kuyisihluthulelo sokuhlanganisa ibhizinisi lonke nokufeza izinhloso zakho eziyinhloko.
Ukuhlukaniswa kweminyango phakathi kweminyango kuvame ukukhulunywa ngakho, kepha ama-silos eminyangweni yomnyango avame ukunganakwa. Isibonelo, ngaphakathi komnyango wakho wokumaketha, kungahle kube nokuhlukana okuqhubekayo nokungezwani. Imisebenzi ehlukile yokukhangisa ingasebenza yodwa ngaphandle kokuxhumeka okubanzi kumasu; idatha ingaphathwa kabi, ifakwe ngokungafanele ngenxa yephutha lomuntu, noma igcinwe ngezakhiwo ezahlukahlukene nasezindaweni ezihlukile. Iswela ukukhulumisana nayo idlala indima enkulu ekugcineni lokho okufanele kube umnyango ohlangene ohlangene.
Namuhla, ukumaketha kuxhaswa ubuchwepheshe. Noma ungaliboni ibhizinisi lakho njengeliqhutshwa ubuchwepheshe, ungaqiniseka ukuthi line-stack tech technology esebenza. Noma ngabe lokho kuyisisekelo esiyisisekelo futhi esaziwa kakhulu kwezinhlelo zokusebenza ezifana ne-Google Analytics,I-Hootsuite noma i-Mailchimp, noma isoftware ethe xaxa ye-niche yakho.
Ubuchwepheshe bungasiza kakhulu ekuqinisekiseni ukuthi lezi zinqubo ezihlukanisiwe ziyahlanganiswa. Izinhloso ngaphakathi komnyango wakho wokumaketha zingahluka kepha manje sezingaba phakathi nendawo, zihleleke futhi ziqondaniswe. Izinkampani ezingaphezu kuka-4,000 manje sezinakho utshalomali kubuchwepheshe bokumaketha, futhi kuyimboni ekhulayo, wonke amabhizinisi angazuza kuyo.
Ochwepheshe abaningi bezokumaketha bazithatha "njengabadali" Futhi ngesizathu esizwakalayo futhi, njengoba kuyinto ebalulekile yendima yabo futhi eye yaphakamisa ukumaketha ngaphezu "kokuhle ukuba nakho" okujwayelekile, ukuba nomthelela obonakalayo ebhizinisini. Kodwa-ke, naphezu kwalokhu, ayikwazanga ukubonakala njengebhodi kanye ne-C-Suite njengecebo elibalulekile.
Kodwa-ke, njengoba ubuchwepheshe be-smart ne-Big Data buqhubeka nokwakha indlela imikhankaso yokukhangisa eyakhiwa ngayo, sekuyisikhathi sokwamukela ukumaketha kuyisayensi. Kuqhutshwa ubuchwepheshe, kepha kusalokhu kufakwa ukuqonda kwethimba lakho, ukumaketha sekuwubuciko besayensi obungalinganiswa, bulandelelwe futhi buqashwe eduze, ukuqinisekisa imiphumela emihle kakhulu.
I-80% yezinkampani manje unochwepheshe omkhulu wezokumaketha noma okulingana naye ngokwe-2015-16 Gartner CMO Spend Survey. Lokhu kuqhubeka kufakazela iphuzu lokuthi ubuchwepheshe bokumaketha buzosala nokuthi budlulela ekubeni yisengezo esisekelayo kumxube wokumaketha. Njengoba ikwazi ukuqhuba ukuthengisa, ukwenziwa ngcono kokusebenza kahle, kanye nokwenziwa kwe-ROI yebhizinisi elibonakalayo, ukumaketha manje sekuyakwazi ukubekwa njengokuphokophelelayo okusiza ngqo ukusheshisa ukukhula kwanoma yiliphi ibhizinisi.
Ngemikhankaso ebhekiswe kakhulu, ukukhiqizwa kokuhola nokuthengisa kufanele kukhuliswe ukuletha i-ROI ephezulu. Ngakho-ke, lokhu kufanele kukuvumele ukuthi uhlangabezane nakho konke okulindelwe emakethe yakho oqonde kuyo, njengoba unedatha yokuqinisekisa ukuthi uyazi ukuthi bafunani.
IMartech akuyona into entsha…
IMartech ayiwona umqondo omusha, noma kunjalo, futhi uma ihlanganiswa nemisebenzi yokumaketha ingahlehlisa uhambo lwakho lwamakhasimende futhi isheshise ukukhula kwebhizinisi lakho kusuka ekwazisweni komkhiqizo kuye ekuholeni nasekuthengiseni. Ungaqiniseka ukuthi izimbangi ezikwi-niche yakho zakha izitaki zazo zokumaketha, uma zingazisebenzisi, ngakho-ke nawe kudingeka wenze okufanayo.
Ukukhetha ukungazinaki izinzuzo ezingalethwa ubuchwepheshe bokumaketha ebhizinisini lakho kukhetha ukuzibeka esimweni esingesihle kulabo oqhudelana nabo. Isimo sesimanje sokuthengisa nokumaketha sishintshe ngendlela enhle kakhulu ngenxa yobuchwepheshe; ibhizinisi lakho lidinga ukuqinisekisa ukuthi liyashintsha futhi.
Uma ungathanda ukubona ukuthi iMartech ingasiza kanjani ukukhulisa ibhizinisi lakho, sicela ubheke I-Comms Axis'services - asizithandi izingxoxo ezingekho kwesibopho!
Tags: ukukhula kwebhizinisiukukhulumisanaukukhulamarketingukuhlaziywa kwezokukhangisaidatha yezokumakethaimisebenzi yezokumakethaubuchwepheshe bokumakethautshalomali lobuchwepheshe bokumakethaisu lobuchwepheshe bokumakethamartechutshalomali lwe-martechisu le-martech
Ukhethwe yiBrand Republic njengomunye wabaphehli abaphezulu be-50 UK Marketing kanye ne-Social Media, uDan Purvis unentshisekelo yokuletha okuqukethwe, ukumaketha nokuthengisa ndawonye ukuxhuma amabhizinisi nezethameli zabo, ukuze ahambise inani elibonakalayo lebhizinisi ne-ROI.
Ungabagcina Kanjani Abasebenzisi Bakho Bajabule Lapho Ukhulula Isibuyekezo Esikhulu Kuhlelo Lakho Lokusebenza
Uhlelo Lwezinyathelo Ezi-5 Lokukhulisa Ukuphuma Kwakho Kwabathengi.